Skype 4.0 loogu talagalay Linux oo foornada ka baxsan | Laga soo bilaabo Linux
Skype 4.0 loogu talagalay Linux oo ka baxsan foornada
nano | | Aplicaciones, GNU / Linux, Noticias
Oo waa maya, ma kaftamayo, waxaan ahay dhab, maanta June 14, 2012 nooca 4.0 ee Skype loogu talagalay Linux oo leh 32-bit iyo 64-bit qaab-dhismeed buuxa (malaha maktabado 32-bit ah), waad qiyaasi kartaa layaabkeyga markaan ku arkay warka ku jira G +.
Aynu u nimaadno barta:
Ugu horreyntii, waxay yiraahdaan in badan oo ka mid ah wajiga beta ayaa u oggolaaday iyaga inay soo ururiyaan jawaab-celin ku saabsan qaladaadka weyn ee ay saxeen inta badan, halkanna waxay ku yiraahdaan:
Dabcan, waxaan haynaa xamuul kale oo yar yar oo horumar iyo hagaajin ah. Sidaad qiyaasi karto, liistadu aad ayey u dheertahay waxayna qaadaneysaa waqti aad u badan in la wada qoro, laakiin qaar baa mudan in la xuso:
Hagaag, laga bilaabo isbadalada waaweyn ...
Waxaad ka heli doontaa afar isbeddel oo waaweyn sii-deyntaan:
Waxaan haynaa Wadahadal Cusub Arag meesha ay isticmaaleyaashu si fudud ula socon karaan dhammaan wada sheekaysigooda daaqad midaysan. Isticmaalayaashaas doorbidaya aragtida hore waxay ku joojin karaan tan xulashooyinka Wadahadalka;
Waxaan leenahay sumcad Wicitaan cusub;
Tayada wicitaanku weligeed ma fiicnayn iyada oo ay ugu wacan tahay maalgashiyo dhawr ah oo aan ku samaynay hagaajinta tayada maqalka;
Waxaanan ka shaqeynay hagaajinta tayada wicitaanka fiidiyowga waxaan sidoo kale kordhinay taageerada kamaradaha badan.
Maxaa la tarjumay waxay noqon doontaa:
Waxaan leenahay aragti wada hadal cusub halkaasoo isticmaaleyaashu ay si fudud uga daawan karaan sheekooyinkooda daaqad midaysan (aamiin!). Isticmaalayaasha doorbida aragtida hore waxay si fudud u joojin karaan midka cusub xulashooyinka.
Waxaan leenahay aragti wicitaan cusub.
Tayada wicitaanku waxay leedahay horumar aan waligeed hore loo arag oo ah (on Skype for Linux) taas oo ay ugu wacan tahay baadhitaan ballaadhan.
Waxaan sidoo kale ka shaqeyneynaa hirgelinta tayo wanaagsan oo wicitaanno fiidiyoow ah, sidoo kale waxaan u fidineynaa taageerada kamarado badan (Oh my god, AMEN!).
Waxa kale oo jira liis ah isbeddelo "yar" oo la hirgaliyay:
hagaajinta wada shaqeynta sheekada
joogitaanka cusub iyo astaamaha emoticon
kartida lagu keydin karo laguna arki karo lambarrada taleefanka cinwaanka xiriiriyaha Skype
fursada aad uga hooseysa Skype ee Linux ayaa burburi doonta ama barafoobi doonta
taariikhda wada sheekaysiga rarku waa ka dhakhso badan yahay
taageerada laba luqadood oo cusub: Czech (calanka: cz) iyo Noorweey (calanka: maya)
Maxay noqon laheyd:
Awood u leh inuu arko lambarada taleefannada ee dadka lala xiriirayo.
Fursad aad u yar oo ah qaboojinta barnaamijka.
Taariikhda sheekaysiga ayaa si dhakhso leh u raran.
taageerada laba luqadood oo cusub: Czech iyo Norwegian
Shaki la'aan tani waa warka bisha ee la xiriira Linux, si fudud oo weyn, hadda waa waqtigii la isku dayi lahaa oo la arki lahaa waxa dareenku keenayo, waxaan rajeynayaa inay leedahay tayadaas ay ballanqaadeen, hadda waxaan ka tagayaa xiriirka soo dejinta Halkan, si ay u soo noolaadaan.
Maxay kula tahay Ma soo dejinayaan? Mise imminka ayay ka aamin baxeen Skype?
source: Blog Blog
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » Skype 4.0 loogu talagalay Linux oo ka baxsan foornada
43 faallooyin, ka tag taada
Inbadan kadib maqnaashaha (damn disease: U) iyo ku wareegida qurxinta kumbuyuutarka (waqti badan oo bilaash ah lol, kuwa i soo raaca tweeter way ogyihiin waxa aan ka hadlayo) oo waxay dileen jiirka sida 6 jeer LMDE Toddobaadkan (iskudhaf iyo iskudhaf waxay yihiin nacaybkeyga ... in taydu tahay inaan sawiro oo aan xoqo, ma ahan inaan wax ka beddelo waxyaabaha muhiimka ah ee OS xD) akhri tan ... waa wax cajiib ah!
Horaan ugu rakibay LMDE isla marka aan soo nooleeyo jiirka lol
Waxaan hadda u soo dejinayaa.
Waxaan rajeyneynaa inaysan waqti dheer qaadan doonin in laga helo Arch repos, laakiin waqtigaas ...
Waan ka laabanayaa wixii aan iri, waxaan ka soo degsanayaa AUR. in laga helo websaydhka Skype waxaa jira oo keliya xirmooyin loogu talagalay Ubuntu, Debian, Fedora iyo OpenSUSE
Horay ayey ugujirtaa keydka rasmiga ah 🙂
Wanaagsan !!! Ma fileynin in ka dib iibsashada Skype ee Microsoft ay sii wadi doonto horumarinteeda Linux !!! isla marka aan guriga imaadaba waan soo dejiyaa 🙂
Xaqiiqdiina si fiican ayey u shaqeysaa ... waa waxa xiisaha leh, tijaabinaya waana mid aniga igu habboon xD
dhab ah? in hoos loo dhigo yaaaaaaaaaaaaa
Waxay ahayd waqti!
Xiiso leh iyo in la isku dayo mahadsanid warbixinta.
Ufff… waxaa loogu talagalay Fedora 32 bit, ma soo degsado.
Sidee u rakibtay?
xirmada 32-bit waa la soo dejinayaa ka dibna "yum rakib packagename.rpm". yum si otomaatig ah ayuu u rakibi doonaa ku-tiirsanaanta xirmada 32-bit si ay uga shaqeeyaan nidaamka 64-bit.
Miyaad maqashay / akhriday in skype uu xayeysiis gelin doono wicitaanada fiidiyaha? http://www.fayerwayer.com/2012/06/skype-insertara-imagenes-publicitarias-durante-las-llamadas-de-audio/
Taasi ma fiicna, laakiin maadaama aanan si dhib yar wicitaanno fiidiyoow ah u sameyn karin laakiin cod ahaan (Waxaan uga tegayaa wicitaannada fiidiyowga google hangouts) ma haysto wax isku dhafan
Uma arko qalad, waa kaliya wicitaanada maqalka, ma ahan wicitaanada fiidiyowga xd
Skype ayaa maanta bilaabay "ogeysiis wada hadal ah", xayeysiis ka soo muuqan doona inta lagu jiro wicitaanada maqalka ee u dhexeeya laba qof oo adeegsanaya adeegga.
Waa maxay nasiib, markii ugu horeysay ee aan ku rakibo Linux (gaar ahaan sabayon) pc-ga wanaagsan iyo skype 4.0 wuu soo baxayaa, ma fiicnaan karto.
Ku jawaab mikaoP
Horey waan iskuday oo xitaa kamarada websaydha ayaa aniga ii shaqaysa, wax aan nuqulkii hore uusan samayn 😀
Hadda haddaan gabdhaha ku saari karo cam! (6)
Shabakadda waxaa ku jira qoraal aad ku xallin karto dhibaatooyin badan oo kaamerada webka ah ee Skype 2.2.
Algabe ma waxaad kala soo soo degtay 32 bit ee fedora oo waxaad ku rakibtay nidaam 64 bit ah ??
Waa hagaag runta haddii aan u adeegsado, dabcan waxay kuxirantahay qofka aad lahadleyso. Marka lagu daro arjiga su'aasha, waxaan isticmaalaa adeegyada Ekiga, Gtalk, iyo Empathy. Had iyo jeer waxay iila muuqatay xal aad ufiican aniga maxaa yeelay waxay ogolaaneysaa in la helo barxad jaango'an (guud ahaan) iskudhafaynta oo u oggolaanaysa wada xiriirka wanaagsan ee u dhexeeya mac, win iyo Linux iyadoon dhibaato badan iyo maktabado loo helin tan ama tan.
Anigu ma aanan cusbooneysiin oo durba waxay ku jirtaa Arch Community repos. Waxaan imid guriga oo waan cusbooneysiiyay waana tijaabiyey. Waxaan rajeyneynaa inay horumariyaan oo ay saxeen faahfaahinta yar yar ee nuqulkii hore lahaa.
Jawaab Jorge Manjarrez
Jo, waan aqriyay umana maleynayo. Waa warka ugu yar ee aan filayo.
Si aad u soo dejisorrrrr.
Qof ma fadlan ii sharixi karaa sababta dadka isticmaalaya qalabka 'distro' ee wata xirmooyinka .deb ay xaq ugu leeyihiin noocooda 64-bit u dhigma, iyo kuwa xirmooyinka .rpm aaney aheyn?
Way fududahay, maxaa yeelay Ubuntu xitaa way ku jirtaa maraqa. Uma soo dejinayo isla, mana waalanayo inaan mar kale dhigo Fedora 32, sida ugu wanaagsan ee ay u shaqeyso 64.
Mudanayaal waxaa jira ku tiirsaneyaal laga bilaabo 32bits ilaa 64bits ee Fedora, ha ku hafan galaas biyo ah xD
In ay jiraan kuwa doonaya, ma jecli inaan maamulo 32 in ka badan 64 codsi, waxaan hore u soo maray khibrado xun oo dhawr ah oo ku saabsan sheygaas yar. Salaan.
Weligey dhibaatooyinkaas ma soo marin, waa inaan dhahaa xD
Juan Carlos Waxaan ula jeedaa, waligaa ma isticmaali doontid skype maxaa yeelay ma jiro nooc 64-bit ah oo loogu talagalay fedora?
Waa inaad weydiisaa kuwa abuuraya baakadaha in. Sidoo kale waxaan u maleynayaa inay sabab u tahay caan ka qaadista qaybinta adeegsata xirmooyinka .deb. Si loo xuso ubuntu, reexaanta, "derivatives" ee ubuntu, debian GNU / Linux, iyo wixii la mid ah.
Mahadsanid, grazie, microsoft, waxaan u ordayaa inaan soo dejiyo, ugu dambeyntiina, waa inaanan isticmaalin beta xD karaahiyada ah ...
By the way, qofna ma garanayaa waxa uu ahaa / yahay Free Skype (oo aan la obfc) iyo mashaariicda GNU Free Call?
waa war fiican ..
si aad ugu rakibto ubuntu iyo Linux mint waa inaad tirtirtaa noocii hore oo aad kala soo degtaa xirmada cusub .deb oo aad gacanta ku dhigtaa ??
Hagaag, waxaan u maleynayaa in si xad dhaaf ah loogu rakibay noocii hore ee xD
Waxaan rumeysanahay? Waa inaad imtixaanka qaadataa si aad fikraddaada uga dhiibato oo aadan ugu wareegin inaad dhahdo waxyaabo aadan isku dayin.
Ma dareemayo inaan sameeyo, ka sokow maadaama adduunka kumbuyuutarku jiro marka aad rakibayso barnaamij si xad dhaaf ah u rakibaya qaabkiisii ​​hore, markaa jooji qulqulatooyinka, laga yaabee markaad cusboonaysiiso libreoffice-ka oo leh sudo apt-get casriyayn ah nooca jir joogo? sidaas?
Waxaan kaloo idhi waan aaminsanahay, hadaad rabto inaad sifiican u rumaysato iyo waliba sidoo kale 🙂 ayax yar !!!
Xaqiiqdii, waxay i siisay dhibaatooyin ku saabsan rakibidda rafiiqayaasha wada-hawlgalayaasha mana ogi waxa ka maqan, waxaan furey qaybtii hore waana taas.
Waxaad isticmaashaa ubuntu: 0
Sidoo kale waa !!
Sifiican ayuu aniga ila shaqeeyaa .. ka tirtiro qaybtii hore oo guji guji xirmada la soo dejiyey ..
wey socotaa 😀 😀
Koontadaydu waa: jamin samuel qofkii raba inuu igu daro
Waxaan ku rakibay dusha sare dhib la'aan, laakiin waan ogahay qof ku fashilmay qaabkan. Waxa ugu fiican waa inaad tirtirto tii hore wax dhibaato ahna kuma qabtid.
Waxaan qabaa su'aalo:
Haddii noocii hore uu ahaa beta, halkee ayuu deggan yahay nooca 2.2?
Aaway nooca 3aad?
Ma rabtaa inaad si dhakhso leh u soo dhejiso nambarka nambarka si aysan ugu muuqan illaa iyo hadda gadaashiisa noocyada OS kale?
Ha ka jawaabin faallooyinkaan
Kaliya waxaan rabaa inaan tilmaamo khalad tarjumaad aad u caan ah dhamaadka maqaalka. Markuu ku hadlayo luqadaha norwejiga iyo Czech, wuxuu u turjumayaa "luqad" Ingiriis iyo luqadda Isbaanishka. Turjumaada saxda ah waa "luqad" ama "luqad." Ereyga "luqad" wuxuu macno kale ku leeyahay Isbaanishka, halka Ingiriisiga "luqad" u adeegayso muujinta labada fikradood: luqad iyo luqad.
Hagaag, halkan waxay ku tusaysaa inay isku macno yihiin:
Ku jawaab Razetsu
Waan jeclahay, waan jeclahay! (* w *)
Ku soo jawaab Saito
cunistii miiga dijo
Way fiicantahay !!! Waxay u shaqeysaa si aad u wanaagsan !!!! waa wax laga xumaado in aanan lahayn xiriiro isticmaala skype ...
Ka jawaab cannibal ka miami
Horey ayaan u rakibey oo si fiican ayey u shaqeysaa oo kaliya in marka wicitaanku shaqeynayo aanan soo saari karin dhawaaq kale. Waa inay ahaato dhibaato xagga dhismaha ah Waxaan u malaynayaa xD inay adeegsato fedora 17 64bits oo kaliya waxaa jira nooc ka mid ah 32 oo loogu talagalay fedora -.-. Waxaan rajeynayaa hadda haddii ay helaan xirmada 64 jajab!
Ku jawaab Kai
Pantheon: Khibradda Dugsiga Hoose
GIMP 2.8 Miyay u qalantay sugitaanku?